တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း: ကိုယ်ချင်းစာပါ ပြည်ကြီးရှင်
Due to inhumane treat of Malaysian, many foreign maids are brutally tortured and killed. That's why, Indonesia and Cambodia have stopped sending maids from their country to Malaysia.
Now, Myanmar officials are planning to send maid workers to Malaysia as the request of Malaysia Prime Minister.
So, Let's stop and ban Myanmar's Goverment Offical's plan to send maids to Malaysia.
မလေးရှားနိုင်ငံသား အလုပ်ရှင်တို့၏ အိမ်ဖော်၊ အိမ်အကူအလုပ်သမများအပေါ် မတရားပြုခြင်း နှင့် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများ
(မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက် Women Aid's Organisation (WAO) မှ စုဆောင်းပြုစုထားသော အိမ်ဖော်တို့၏ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံဘ၀များနှင့် အလုပ်ရှင် မလေးရှားလူမျိုးတို့၏ သဘောထားများကို Friend Ever မှ မှီငြမ်း ဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့ မြန်မာလူမျိုးတို့၏ဘ၀များ ထပ်မံမနိမ့်ကျနိုင်စေရန်အတွက် မိမိတို့တတ်နိုင်သမျှ ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါရန်လည်း အလေးအနက် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။)
မလေးရှားသည် ပြည်ပအလုပ်သမားများအပေါ် လူသားမဆန်စွာ မတရားပြုမှုများသည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပိုမိုဆိုးဝါးလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုးဝါးဆုံးမှာ အိမ်ဖော်အလုပ်သမများအပေါ် ယင်းတို့၏ ရက်စက်စွာ ဆက်ဆံမှုများသည် အလွန်ဆိုးဝါးလျက်ရှိသည်ဟု၊ WAO (Women’s Aid Organization) မှ လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။
မလေးရှားသည် ပြည်ပမှလာရောက်သော အိမ်ဖော်အလုပ်သမများအပေါ် မတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုသည် အခြားနိုင်ငံများထက် ပိုမိုဆိုးဝါးလျက်ရှိပါသည်။ အိမ်ဖော်အလုပ်သမတို့၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရသော လုပ်ငန်းခွင်သည် အလုပ်ရှင်နှင့် အိမ်တစ်အိမ်တည်းတွင် နေထိုင်ရခြင်း၊ ယင်းတို့အတွက် ကာကွယ်ပေးထားသော ထိရောက်သောဥပဒေကို မလေးရှားအစိုးရမှမထုတ်ပြန်ထားခြင်း၊ ဥပဒေမှာ အလုပ်သမကို ကာကွယ်ခြင်းထက် မလေးရှားနိုင်ငံသားအလုပ်ရှင်များကို ကာကွယ်ပေးထားခြင်း၊ အိမ်ဖော်အလုပ်သမများသည် အခြားအလုပ်သမများနှင့်မတူပဲ အလုပ်လုပ်ရသောနေရာတွင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မရှိခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ပိုမို၍ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို ခံစားရပါသည်။
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 12:15 AM